Somaliland: Xukuumadda oo ku Eedeysay WADDANI inay qaab duullaan ah dooneen inay u galaan Saldhiga dhexe - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Xukuumadda oo ku Eedeysay WADDANI inay qaab duullaan ah dooneen inay...
Wasiirul-dawlaha amniga ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jamhuuriyadda Somaliland, Maxamed Muuse Diiriye, ayaa ka hadlay sababta loo xidhay Muniir Axmed Cigaal oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI iyo wariye Cali Mahdi oo ka hawl-gala telefiishanka Bulsho TV.
Wasiirul-dawluhu waxa uu sheegay in labadaas nin aanay u xidhnayn arrin siyaasadeed, balse ay u xidhan yihiin dacwad uu kaga soo ashkatooday nin ay nabarro gaadhsiiyeen. Waxa kaloo uu sheegay in aanay habboonayn in Cabdiraxmaan Cirro la murmo askarta saldhigyadda booliska ka hawl-gala, “Waxa loo xidhay waxa weeye nin ilkaha laga riday, gacantanna laga jabiyay ayaa yidhi hebel iyo hebel ayaa i soo weeraray, ciddaas ayaanna igu soo dirtay, waxay nimankaasi u xidhan yihiin eedayn iyo cid wax ka sheegatay, arrin siyaasadeedna uma xidhna arrin kalana uma xidhna, muwaadin soo ashkateeyay ayay u xidhan yihiin.
Guddoomiyaha xisbiga WADDANI, waxa uu doonayaa in uu dalkan u soo tafo xayto oo uu xukumo, saldhigyada askartii joogtayna wuu la murmayaa oo way is qabqabsanayaan, haddii uu wax tabanayo oo cid xisbigiisa ka tirsani ay xidhan tahay waxa ay ahayd in wasaaradda arrimaha gudaha yimaado ama taliska booliska tago, maxaa isku geeyay askarta saldhigyada joogta,”ayuu yidhi Wasiir Maxamed Muuse oo maanta la hadlay warbaahintu.
Wasiirul-dawluhu oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Ciidanka boolisku umay na diidin in uu booqdo, qaab duullaana ayay ahayd oo Cabdiraxmaan Cirro oo qudha muu ahayn ee waxay ahaayeen dhawr iyo toban nin, waxaana ka mid ahaa Siciid Sulub iyo Maxamed Cabdillaahi Uur-cadde, culasyka intaas leegna saldhigyadu ma ogolaanayaan, askartuna culasyka meesha marayay ayay la yaabeen, nimankii saldhig tagi lahaana maaha, waa madax xisbi, waa madax qaran oo golaha wakiilada madax ka ah, ahna xisbi mucaarada.”
“Waxa aan leeyahay saaxiibaday dadka u soo bandhiga barnaamij iyo wax-qabad iyo waxa aad ku hoggaaminaysaan dalka iyo siyaasadiinu waxay noqonayso sheega, hebel baa sidan yidhi, heblaayaa sidan tidhi ha ku mareeraysanina,”ayuu yidhi Maxamed Muuse Diiriye.